‘Kumbunyikidza madzimai bodo!’
You are at:Home»NHAU DZEMUNO»‘Kumbunyikidza madzimai bodo!’
By Muchaneta Chimuka on	 December 15, 2017 · NHAU DZEMUNO
MUKURU wemadzishe muZimbabwe, Mambo Fortune Charumbira, vanoti vatungamiriri vematunhu nevemachechi vane basa guru rekurwisa nyaya dzemhirizhonga yemudzimba sezvo ichidzosera shure budiriro yenyika.
Vakataura mashoko aya pamusangano wakananga kurwisa nyaya dzemhirizhonga — we16 Days of Activism Against Gender Based Violence — uyo wakarongwa nesangano reMusasa Project muHarare svondo rapera.
“Tinoda kuti bhajeti renyika rive nehomwe inoshandiswa muzvirongwa zvekurwisa mhirizhonga mudzimba. Mitongo inopihwa vapari vemhosva ngaive yepamusoro nekuti upfumi hwenyika haufi hwakasimuka munyika ine mhirizhonga. Mashoko echenjedzo maringe nekurwisa nyaya dzemhirizhonga anoda mukomberanwa weHurumende nemasangano akazvimiririra kuti apinde muvanhu kuitira kuti vasazopara mhosva vasingazive,” vanodaro.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, mumiriri weGoromonzi West mudare reNational Assembly, Cde Beatrice Nyamupinga, vanoti sevamiririri vevanhu mumatunhu akasiyana, vanosangana nenyaya dzemhirizhonga dzinomhan’arwa kwavari izvo zvinobatsira kuti vange vachigadzira mitemo inoyamura veruzhinji.
“Mimwe mitemo haisi kunyatsoshandiswa zvakanaka asi ndinofara zvikuru kuti vamwe vapari vemhosva dzakadai sechibharo nekuponda vari kupihwa mitongo yakakura zvinova zvinopa chidzidzo kune vamwe. Kana vanhu vakawaniswa ruzivo vanokwanisa kumhan’ara nyaya idzi kumapurisa nenguva,” vanodaro.
Munyori kusangano rinoona nezvemakereke epositori neZion reUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe (UDACIZA), Reverend Edison Tsvakai, vanotiwo nhengo dzemakereke aya dzinosangana nenyaya dzemhirizhonga dzakasiyana.“Tine vemakereke epositori neZion ane vamwe vatendi vanodudzira mashoko kana kuti zvinyorwa zviri muBhaibheri nenzira inogutsa zvido zvavo, zvikuru kudivi revarume.
‘‘Unoona vachiti Bhaibheri rinoti ivai nemadzimai akawanda kana kuti berekanai muwande sejecha regungwa. Kutadza kududzira Bhaibheri zvakanaka uku pamwe nemimwe mitemo inoiswa mumachechi zvinombunyikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana.
“Baba vanoramba vachingoroora madzimai akawanda uye vazhinji vacho dziri pwere dziri pasi pemakore 12 chaiwo inova mhosva pasi pemutemo,” vanodaro.
Rev Tsvakai vanoti vamwe vevanasikana vanoroorwa vachiri vadiki vozosangana nematambudziko ekurasikirwa neupenyu panguva yekusununguka sezvo miviri yavo inenge isati yasimba.